ब्लगवाट मालामाल | मेरो कलम
तपाई प्रतिदिन कति घण्टा ईन्टरनेट चलाउनुहुन्छ ? फेसवुक,गुगल,याहु लगायत अन्य साईटहरु हेर्दाहेदै कम्तिमा पनी दुईतिन घण्टा त अनलाईनमा वस्नुहुन्छ नै । व्लग पढ्न त झनै छुटाउनुहुन्न होला । देखेको, भोगेको र आफुलाई लागेको विचार अभिव्यक्त गर्ने अनलाईन डायरी व्लग पढ्नुको मज्जा त छुट्छै हुन्छ नै । व्लग पढ्दाको आनन्द नै घटना,दृष्य एवं अनुभुती आफैनै जस्तो लाग्ने कारणले पनी व्लग वढी पढिन्छ । हामीले व्लग पढेर जति मज्जा लिईरहेका छौ , व्लग लेख्नेलाईपनी झनै मज्जा भईरहेको हुन्छ । ब्लगको दायाँवायाँ छेउहरुमा हेर्नुभयो भने तपाईले अनलाईन विज्ञापनहरु देख्नुहुनेछ । विज्ञापन हेरिएवापत र क्लिक भएवापत व्लगरको एकाउण्टमा पैसा जम्मा भईरहेको हुन्छ । तपाईलाई पनी देखेको भोगेको र लागेको कुरा लेख्न मन लागेको छ भने व्लगिङ गर्न सक्नुहुन्छ । व्लगिङ गर्न चौविसै घण्टा ईन्टरनेटमा वस्नैपर्छ भन्नेपनी होईन । अन्य काम गरेरपनि थोरै समय छुट्याएर व्लगिङ गर्न सक्नुहुन्छ । व्लग वनाउनको लागी ल्गस्पोट डटकम वा ओडप्रेस डटकममा एकाउण्ट खोल्नु उत्तम हुन्छ ।
रामेछापका उद्धव तामाङ हाल ईजरायलमा केयरगिभरको रुपमा काम गर्नुहुन्छ । दिनको ८ घण्टा कम्पनीको काम गरिसकेपछि तिनदेखी चारघण्टा ईन्टरनेटमा वस्नुहुन्छ अर्थात व्लगिङ गर्नुहुन्छ । मनोरञ्जनात्मक सामाग्री आफ्ना व्लगमा राख्नुहुन्छ । तामाङ भन्नुहुन्छ व्लगिङ गर्नु मेरो नशा हो, म आत्मसन्तुष्टिको लागी व्लगिङ गरिरहेको छु साथै दिनको औषत १० डलरको हाराहारीमा कमाईपनी भईरहेको छ । झापाका ज्ञानु वस्नेत व्लगमार्फत नै व्लगरलाई टिप्स एण्ड ट्रिक सिकाउनुहुन्छ । कस्तो टेम्प्लेट प्रयोग गर्ने,कसरी टेम्प्लेट ईडिट गर्ने, व्लगलाई कसरी सुसज्जीत गर्ने आदिईत्यादि । बस्नेत भन्नुहुन्छ अरुकाम गरेर दिनमा दुईतिन घण्टा व्लगिङलाई छुट्याउछु, मासिक ६ सय डरलको हाराहारीमा कमाई भईरहेको छ,पुरै समय व्लगिङ गर्ने हो भने त मनग्य आन्दामीको श्रोत बन्नेमा कुनै शकां छैन । काठमाण्डौवाट गणेश कार्की आफुलाई लागेको विचार व्लगमा लेख्नुहुन्छ । समयसामयिक विषयवस्तुमाथी रहेर विष्लेषण गर्नु कार्कीको रुचीको विषय हो । कार्की भन्नुहुन्छ दिनको दुई घण्टा व्लगिङको लागी समय निकाल्छु । व्लगिङवाट आएको कमाईले काठमाण्डौमा वस्न सजिलो भएको छ । साथै व्लगको कमाईले खाजा खर्च र मोटरसाईकलमा पेट्रोल हाल्न समेत धानेको छ ।
आफुले जानेको सिप भण्डारण गर्ने ठाउँ हो व्लग । विचार,अनुभुतीलाई विश्वका मान्छेले हेरिरहेका हुन्छन्,साथै व्यक्तित्व वढ्नुका साथै अदृष्य रुपमा पैसा कमाईपनी भईरहेको हुन्छ । ब्लगवाट कमाई गर्न अनलाईन विज्ञापन राख्नुपर्ने हुन्छ । अनलाईन विज्ञापन दिलाउने कम्पनीहरु धेरै छन् । गुगलको एडसेन्स सवैभन्दा राम्रो र विश्वसनिय विज्ञापनदाता कम्पनी हो । भिजिटर जती वढाउन सक्नुभयो अर्थात जती उत्कृष्ठ सामाग्री आफ्नो व्लगमा राख्न सक्नुहुन्छ त्यसैको हिसावले तपाईको कमाई सुरु हुन्छ । एडसेन्स एकाउण्ट वनाउन भन्दा अघि केहि सर्तहरु छन् । व्लग वनाएको कम्तिमा ६ महिना हुनुपर्छ । आधा दर्जन भन्दा वढी सामाग्री प्रकाशित हुनुका साथै प्रसस्त भिजिटरहरुले भिजिट गरेको हुनुपर्छ । एउटै मेल आईटीमा एक भन्दा वढी एड्सेन्स एकाउण्ट वनाउन भने सकिदैन । साथै गुगल एडसेन्सले नेपाली भाषालाई प्राथमिकतामा नराखेकोले अग्रेजी अर्थात अन्य छनोटका भाषाका सामाग्री राख्नुपर्ने हुन्छ । व्लगिङ गर्दा जुनसकै समयमा हामीले याद गर्नुपर्ने विषय भनेको व्लगमा पोष्ट गर्न वनाईएका सामाग्री कतै काहिँवाट कपी गरिएको अथवा ईन्टरनेटमा पोष्ट भएकोसगँ मिल्दोजुल्दो हुनुहदैन । आफ्नै मौलिक लेख राखेर एडसेन्स डटकममा आफ्नो वायोडाटा सहित एप्लाई गर्नुभयो भने एकाउण्ट वन्छ । अनलाईन विज्ञापन पाईसकेपछि जस्ता समाग्री पोष्ट हुन्छन् सोहिसगँ मिल्दाजुल्दा विज्ञापन चाडो भन्दा चाडै व्लगमा देखिने हुदा क्लिक हुने सम्भावना वढी हुन्छ ।
व्लगिङ गदै गर्दा धेरै प्राविधिक एवं विषयगत समस्या आईरहन्छन् । आज आफ्नो एकाउण्ट भोली अर्कैको हुन सक्छ , समस्या आईसकेपछि पछुताउनु भन्दा समस्या आउन नदिनु नै राम्रो हो । प्राविधिक समस्या आउन नदिन र तत्काल समाधान चाहिहाल्यो भने नेपालका दक्ष एवं पुराना व्लगरहरु तपाईको समस्या समाधान गर्न तयार छन् । त्यो पनी निशुल्क । फेसवुक ग्रुपमा नेपाली व्लगर युनाईट, त्यस्तै ओडप्रेस नेपाल, बेव डेभलरपर्स नेटवर्क लगायतका फेसवुक ग्रुपमा गएर आफ्नो जिज्ञासा राख्नुभयो धेरै जानकारी पाउनुहुनेछ । ब्लगरको लागी यी फेसवुक ग्रुपहरु अतिनै महत्वपुर्ण छ । ओर्डप्रेस नेपाल र नेपाली व्लगर युनाईले समय समयमा प्रतक्ष्य भेटघाट मार्फत व्लगरका अवसर र चुनौतीका विषयमा प्रतक्ष्य कार्यक्रम गरिरहेका छन् भने पुराना,अनुभवी व्लगरवाट व्लगिङ गर्न चाहनेहरुका लागी अवसरका विषयमा अन्र्तक्रिया समेत गदै आईरहेको छ ।
२४ साउन २०६९ मा अन्नपुर्ण पोष्टमा प्रकाशित लेख ।
Ram Sharan Shrestha May 20, 2013 Log in to Reply
Blogging Tips Haru pani Lyaunu hola. Like HTML Code haru blog template kasari Edit Garne etc. .
Email : stharamsharan@gmail.com
Pankaj Dhami August 7, 2016 Log in to Reply
Blogging Tips Haru pani Lyaunu hola. Like HTML Code haru blog template kasari Edit Garne etc. .nayapaila2015@gmail.com